Inqubomgomo Yokufinyeleleka Kwewebhu | I-Ota Ward Cultural Promotion Association
Iwebhusayithi ye-Ota Ward Cultural Promotion Association kufanele itholakale kuwo wonke umuntu, kufaka phakathi abantu abadala kanye nabantu abakhubazekile. Izindinganiso ZaseJapan Zezimboni i-JIS X 8341-3: 2016 "Imihlahlandlela Yokwakhiwa Kwabantu Abadala Nabantu Abakhubazekile-Amadivayisi Olwazi Nokuxhumana" , Isoftware Nemisebenzi-Ingxenye 3: Okuqukethwe kweWebhu, ngenhloso yokuthobela ileveli "AA".
* Umbhalo othi "ukuhambisana" kule nqubomgomo usekelwe embhalweni ochazwe eKomitini Lezingqalasizinda Lezokutholakala Kwezingosi Zokutholakala Kolwazi "I-JIS X 8341-3: 2016 Imihlahlandlela Yokuthotyelwa Kokuhambisana Nokuqukethwe Kwewebhu-Uhlelo lukaMashi 2016".
Ikhasi eliyisiqalo le-Ota Ward Cultural Promotion Association
Izinga lokuvumelanisa okubhekiswe kulo nokuphendula
Ihambisana ne-JIS X 8341-3: 2016 Level AA
Indlela yokuphumelela engezwa
Izinto ezilandelayo zezinga le-AAA
I-JIS X 8341-3 2.2.3 Izindlela Zokuzimela Ezizimele Zesikhathi
I-JIS X 8341-3 2.3.2 Indlela yokuphumelela yokukhanya okungu-3
I-JIS X 8341-3 2.4.8 Imibandela Yempumelelo yesikhundla samanje
Ifomethi ye-PDF (Portable Document Format)
Ifayela le-Word (Word (Microsoft Word)
Izinsizakalo ezinikezwe okuvela ngaphandle nokuhambisana nokuqukethwe noma amakhasi ewebhu, izithombe, amavidiyo, njll
* Isibonelo se-3.
Izinsizakalo ezinikezwa yi-google (usesho lwangokwezifiso lwe-google, amavidiyo e-youtube, imephu ye-google, i-Google Street View, njll.)
I-SNS (Twitter, Instagram, LINE, njll.)
Amakhasi wezilimi eziningi akhiqizwa ukuhumusha okuzenzakalelayo okunikezwe izizinda ezingaphansi
Okuqukethwe okungewona umbhalo A 〇 〇
Umsindo kuphela nevidiyo kuphela (okuqoshiwe) A - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Amagama-ncazo (aqoshiwe) A - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Ukuhlaziya komsindo noma okunye okuqukethwe kwemidiya (okurekhodiwe) A - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Amagama-ncazo (bukhoma) AA - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Amazwana womsindo (aqoshiwe) AA - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Imininingwane nobudlelwano A 〇 〇
Ukuhleleka okunenjongo A 〇 〇
Izici ezizwelayo A 〇 〇
Ukusetshenziswa kombala A 〇 〇
Ukulawulwa kwezwi A - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Ukugqama (ileveli ephansi) AA 〇 〇
Shintsha usayizi wombhalo AA 〇 〇
Isithombe sombhalo AA 〇 〇
Akunasihibe sekhibhodi A 〇 〇
Isikhathi esishintshekayo A - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Yima kancane, ume ucashe A 〇 〇
Isikhathi esizimele AAA - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
XNUMX kukhanya noma ngaphansi kwenani lomkhawulo A - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Izikhathi ezi-XNUMX zokukhanya okukhanyayo AAA - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Vimba ukweqa A 〇 〇
isihloko sekhasi A 〇 〇
Gxila ngokulandelana A 〇 〇
Inhloso yesixhumanisi (ngokomongo) A 〇 〇
Izindlela eziningi AA 〇 〇
Izihloko namalebula AA 〇 〇
Gxila ekuboneni AA 〇 〇
Ulimi lwekhasi A 〇 〇
Ezinye izilimi AA 〇 〇
Lapho kugxile A 〇 〇
Ngesikhathi sokufaka A - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Ukuzulazula okungaguquguquki AA 〇 〇
Ukuhluka okungaguquguquki AA 〇 〇
Ukukhonjwa kwephutha A - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Ilebula noma incazelo A - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Iphutha iziphakamiso zokulungisa AA - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Iphutha lokugwema (ezomthetho, ezezimali nedatha) AA - 〇 Akukho okuqukethwe okusebenzayo.
Ukuhlukanisa A 〇 〇
Igama, indima nenani A 〇 〇
* Kusukela ngoMashi 3 unyaka kaReiwa
Inombolo yocingo: 03-3750-1611